8 Zvipingamupinyi Kukurukurirana Kunobudirira - Ukama
Mumabhuku mazhinji nemamuvhi, nhaurirano dzinoyerera zviri nyore, nenjere, uye kazhinji nekunzwisisa kuzere pakati pemunhu wese anobatanidzwa.
Muhupenyu chaihwo, hurukuro dzinokanganisika mukati mekuyerera wozotangazve pane imwe nzvimbo isina kugadziriswa gare gare.
Muhupenyu chaihwo, vanhu havazive zvavari kutaura, asi ziva zvakadzama uye zvisingaite kuti vane chimwe chinhu mukati chinofanira kubuda.
Muhupenyu chaihwo, kazhinji - kazhinji - vanhu vaviri vanogona kufunga kuti vari kukurukura nhaurwa imwe, asi munhu mumwe nemumwe ane pfungwa dzakasiyana yekuti musoro wenyaya uyu chii chaizvo.
Chinhu mukugadzirira kwepfungwa, kuneta mumuviri, nguva, nzvimbo, mamiriro ezvinhu, kufananidza zvakapfuura, zvinokanganisa ramangwana, hukama hwehukama, uye mamwe mabhureki akawandisa kudoma zita, uye mhedzisiro yacho hairambike: zvakawanda zvinotaurwa munyika ino yedu, asi zvinonzwisiswa zvakadii?
Izvi zvinongova zvisere zvezvipingamupinyi zvinomira munzira yekutaurirana kwakanaka.
Izvi zvinoita senge zviri pachena chipingamupinyi pakati pemapato anokwanisa kutaurirana.
Kuti vakwanise kutaurirana zvinobudirira, mutauri nemuteereri vanofanirwa kutarirana. Izvi zvinosanganisira kucherechedza nyaya iripedyo, kuziva nezve muviri cues, pamwe nekuziva kwepamoyo.
Nekudaro, vanhu vazhinji vanoona hurukuro seyakaganhurana machisi, vasingatarise zvakanyanya kune cues kana mamwe maonero.
Kana ivo vanotaura pane zvinhu zvavanoziva zvishoma nezvazvo, vasina kuteerera kutambira kuwana ruzivo rwakakosha.
Kuteerera kunonyanya kuitwa usati wavhura muromo wemunhu. Iyo nzira yekuda kuziva zvakakwana kuti ude kuziva zvinhu nezve pasirese.
Vanhu vanoda kuziva uye vanoteerera vanowanzove vanonyanya kutaura. Kana ivo vane hanyawo neyakagadzikana nhanho yeavo vakavakomberedza, vanogona kuve vakasarudzika vekukurukurirana.
Semuenzaniso, kana panguva yekurukurirano inonakidza Munhu A anoona pfungwa dzeMunhu B dzichidzungaira (zvinoratidzwa, pamwe, neMunhu B achida zvinhu zvinodzokororwa), uyezve zvinyoronyoro kuti Munhu B asingazive kana kuvheneka nenzira inopfuura yakajairwa, hurukuro inogona kutungamirwa gomba rezwi rinomira, richisiya Munhu B achinzwa kurerukirwa uye aine chivimbo chekuti hurukuro ichaenderera mberi nekwakabva nako.
2. Kwete Kutaura Nechivimbo
Kana isu tichiri vadiki, tinosvika pakushandisa 'senge' zana zana mumaminetsi maviri, kana 'um' uye 'uh-huh.' Miromo midiki inoshaya chivimbo chekutora nguva yekuvhara pfungwa dzavo kumashoko avo.
Nzeve dzekare, zvisinei, kazhinji dzinowana avo vanochengeta nzvimbo vanokurumidza kumhanyisa mumigwagwa yekutaurirana.
Kana mazwi akatipukunyuka panguva yehurukuro, isu tinofanirwa kunzwa tine chivimbo chakaringana kuti tidaro. Kutya kumbomisa hurukuro kutya kusina musoro uko kwakatadzisa vazhinji kuchinjana kunogona kunakidza.
Uye kune avo vanotaura sekunge chirevo chimwe nechimwe mubvunzo, inodzosera pfungwa uye kuva nemazwi ako uchawana mhinduro shoma dzekugumbuka, dzinovimbiswa.
Kukumbira mvumo yekutaura pfungwa dzemunhu hachisi chinangwa chehurukuro yekugovana zvatiri isu, zvatinoziva, uye (zvakanyanyisa kukosha) izvo zvatinoda kuziva, ndizvo.
3. Kwete Kuita Nechivimbo
Vamwe vanhu vanozotarisa nemaune chero kupi asi kumunhu wavari kutaura naye, uye kubheja kwakanaka vanhu ivavo vakashamisika kuti nei kutarisisa kuchimbidzika nekukurumidza kubva pane zvavari kutaura.
Vanhu vanhu vanotaura vachiona sekungotaura chete. Pamusoro pe Mutauro wemuviri , kutarisana kwemaziso kwakakosha zvikuru pakukurukura zvinobudirira.
Izvi hazvireve kudzidzira kutarisisa. Pazviri nyore kwazvo, zvinoreva kutarisa kune mumwe munhu semumwe munhu anotenderwa munzvimbo yepamoyo yepakati inodiwa pakukurukurirana kwechokwadi.
Tarisa pameso avo, matauriro avo, nyangwe kucherechedza zvipfeko zvavo (munhu akapfeka mbatya dzakanaka uye shangu munhu akagadzirira kutaura).
Kudzivisa kusangana kwemaziso ichagara ichiita kuti mumwe 'atarise' asingachinji, asina kugadzikana, kana - zvakatoipisisa - asingafarire, zvichitungamira mukutsvoda kwekukurukurirana kwekufa.
Yakatsanangurwa: 'Hunhu hwekuoma kubata kana kukunda.'
Ichi ndicho chimwe chezvipingamupinyi zvikuru pakukurukurirana. Mukuyedza kwayo kuve nekusimudzira, kusagadzikana kunodyara kunzwa kwekusafara pakati pevose vanobatanidzwa.
Isu tese tinoziva vanhu vakatoita pfungwa yavo pane chimwe chinhu uye vasingazotsauswe nezvakangoitika kana gakava rine musoro.
Iyi 'mira wakatsiga' maitiro anotungamira vamwe kuti vafunge nezve vanhu vakadaro se 'Sei uchinetseka?' kesi.
Nei uchinetsekana kuyedza kuita hurukuro pasina chakataurwa chichava nehanya nevanhu vakadaro zvakadaro?
Iko hakuna simba rehunhu mukuomesa moyo. Kutaura chokwadi, kapfumbamwe kubva pagumi, imwe inongouya sejeki yekupedzisa.
Nzira 8 Varume Nevakadzi Vanotaurirana Zvakasiyana
Zvakavanzika zvisere zvekutaurirana zvinobudirira
45 Kutaurirana Zvinyorwa Kuunza Kuwirirana Kune Vanoda, Shamwari, Mhuri, Uye Vashandi
Maitiro Ekukakavadzana Zvakadzika, Zvinonetsa Misoro Pasina Iko Kuve Kukakavadzana Kukakavara
18 Mashoko Anonakidza Kuwedzera Kune Rako Repfungwa Duramazwi
Dzimwe nguva, sekusindimara, vanhu vanosarudza mativi zvichienderana nezvikonzero zvakanyanya, uyezve vanonzwa vachimanikidzwa kudzivirira kutendeka kwavo kukuvadza kutaurirana chaiko.
Izvi zvinovimbika zvinogona kuve zvematongerwo enyika, zvechitendero, zvemunhu - hazvina basa. Izvo zvakakosha ndezvekuziva kuti kuzvipira kusingaenzaniswi kwakanyanya kune musungo pane kunyaradza.
Kana hurukuro ikava neyakakodzera, haigone kuve nhevedzano yemusoro wekutaura unoiswa mumusoro, kutadza, kana kuzvidza kusabvumidzwa.
Ngatipikisanei kwechinguva. Rudo runofanirwa kunge rwuri iro Rinovhurwa Huru reMweya, asi ini ndinopa zano kuti vanhu vazhinji vanoshandisa 'rudo' senzira yekutiza nhaurirano yavanogona kusangana nayo vachizviratidza.
Mikana yacho yakanaka kwazvo kuti pane imwe nguva takanzwa mudiwa achiti 'Hatidi mazwi,' nekuti L-O-V-E.
Uye kune vamwe vedu, izvo zvinoshanda chaizvo. Vamwe vedu vakadaro kunzwira tsitsi kune vatinoda kuti mazwi dzimwe nguva anopinda munzira.
Kune vazhinji vedu, zvakadaro, isu tinoda mazwi edu. Tinonyatsoda mazwi acho.
Kutaura hakufanirwe kunge kuri basa pakati pemoyo, kunofanirwa kunge kwakatarirwa senge bonde kana manheru akanyarara pamba.
Rudo runofanira kugara ruchimutsa hurukuro, usambozvidzora.
Kutaura nezvekusungwa, hapana nzira yekunzwa kusungwa kana uchitaura neakadzima.
Uyu ndiye 'Zvakanaka, chaizvo' munhu muhupenyu hwako. Uyu ndiye ane dissertation akagadzirira kudonhera munzeve dzako chero pakudenhwa.
Uyu ndiye zvekare anoshamisika kuti sei vanhu vazhinji vachifanira kunge vari kumwe kunhu paanoshama muromo wake.
Nhaurirano dzinofanirwa kunge dziri nzira mbiri-dzekupa-uye-kutora kuchinjana, kwete hurukuro dzekufamba-famba.
Asi zvakadaro vazhinji vanozvitorera ivo kuna ani-chii-chii-apo-kupi-nei-uye sei vanhu kuti mukati meinchi yekutsungirira kwevanhu ivavo.
Dzimwe nguva kuyedzwa kweshiviriro kunoitwa nemaune, dzimwe nguva mhedzisiro yekusaziva, asi mhedzisiro mhedzisiro inogara ichitsamwisa kune avo vari panotambira.
Kunzwa sekunge zvakakosha kuti utaure zvese nguva dzese unopenga kupfuura kungobata zvishoma kusagadzikana , uye kudaro vachikumbira vamwe kuti vagare vakanyarara kudzamara kuverengwa kwapera, mushure menguva iyoyo vangabvuma kusaziva kwavo uye vatende nehungwaru hwakadonhedzwa.
Izvi zvinogara zvichisiya vasina kutaura vachisurukirwa.
sei kuva mukadzi wechikadzi
8. Kusanzwira tsitsi
Izvi zvakafanana nekuterera, asi zvakasiyana pakuti munhu asina hanya anowanzo zero mukati mezvinhu zvakacherechedzwa kuti azvishandise kune imwe fungidziro (uye chirango) mukana.
Patinonzwa mumwe munhu achiti 'Sevamiriri vadhiyabhorosi,' tinoziva kuti tinogona kupihwa mukana wekusanzwira tsitsi uchiita seyakavhurika maonero.
Patinonzwa mumwe munhu achiti 'Saka zvauri kutaura ndizvo,' tinoziva kuti tave kuda kunzwisiswa zvisirizvo kuitira kuti munhu asina hanya agone kukanda mapfumo kwatiri.
Kana isu tikanzwa mumwe munhu achiti 'Zviripachena kuti haugone kutora joke,' isu tinoziva hapana chinosekesa chakatumbuka.
Ivo vasina hanya havasi kutsvaga kutaurirana zvinobudirira, ivo vari kutsvaga kuti parry, lunge, uye thrust.
Isu tese tinoda kunzwikwa, asi izvo hazvifanire kuuya nekurasikirwa chaiko kuteerera vamwe .
Kutaurirana zvinobudirira kunoreva, muchidimbu, 'Munhu kumunhu: ndinokuona.'
Kugona kutaurirana nemumwe chipo chikuru kwazvo chatinacho, nekuti nacho tinowedzera, hatimanikidzwe isu takabatana, hatisi tega.
Nekudaro, dzimwe nguva chipingamupinyi chikuru pakunzwa mumwe munhu mupfungwa, muviri, nemweya, kukanganwa kuti, nepo miromo yedu ichinyatso shama, ivowo vanogona kuvhara zviri nyore pazvinenge zvichidikanwa.
kutorwa mukana muhukama
unoudza sei mumwe munhu kuti unemanzwiro kwaari
kusaina baba vasina murume vari serious nezvako
zvinonakidza zvinhu zvekuita kumba kana iwe uchinge wabowa
unoudza sei munhu kuti hauchamudi
murume wako paanosarudza amai vake pamusoro pako